Xildhibaanno ku tilmaamay sharci darro xeer uu Reysal Wasaare Khayre soo saaray – Kalfadhi
Xildhibaanno ku tilmaamay sharci darro xeer uu Reysal Wasaare Khayre soo saaray
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka ayaa uga digaya Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre iney xukuumaddiisu la soo gasho faraha shaqadii Baarlamaanka Soomaaliya. Waxay si adag uga soo horjeysteen xeer uu dhawaan soo shaac-bixiyey Reysal Wasaare Khayre, kaas oo dhigaya ineysan wasiir iyo hay’ad ka tirsan xukuumaddiisa la geli karin heshiis hay’ad ama shirkad ajnabi ah iyo mid maxali ah, iyadoo aysan xukuumaddu la ogeen.
Xeerkaas, oo ay soo bixiddiisu ku taariikheysan tahay 29/12/2018, waxa lagu dhex baahiyey warbaahinta todobaadkii hore, waxa uuna xadeynayaa sida loola galayo heshiisyada hay’adaha iyo shirkadaha ajnabiga ah iyo kuwa wadaniga ah intaba. Hase ahaatee, Xildhibaannadan ayaa qaba in cidda kaliya ee xeer nuucaasiya soo saari karta ay tahay Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa ka mid ah Xubnaha ku doodaya in ay xukuumaddu gaftay. Waxa uu uu Kalfadhi u sheegay inuu aad ula yaabay markii uu maqlay in ay xukuumaddu soo saartay xeerkaas. “Waa sharci daro xeerka ay soo saaratay Xukuumadda Soomaaliya xiligaan” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq.
Xildhubaanku waxa uu ku doodayaa inuu Baarlamaankii 9-aad soo saaray xeerka uu Reysal Wasaare Kheyre isaguna soo saaray, waxa uuna ku celceliyey in ay sax tahay in isagaas lagu dhaqmo, haddii wax laga bedelayana loo raaco hanaankeeda, sida uu hadalka u dhigay. “Xeerkaan horay ayuu u jiray, waxaana dib u eegis ku samayn kara Baarlamaanka oo kaliya” ayuu Xildhibaan Cabdirisaaq Axmed ku yiri Kalfadhi.
Sanatay Axmed Cabdixafiid (Bulsho) ayaa Xildhibaan Cabdirisaaq ku waaqsan iney ahayd in ay xukuumaddu baarlamaanku dhex keento marka ay xeer curiso, halkii intey soo saarto ay haddana horay ka amri lahayd in la dabaqo, sida uu hadalka u dhigay. “Waxay ahayd in xeerkaan uu maro nidaamka sharciga ah ee dalka” ayuu yiri Sanatar Bulsho.
Sanatarku waxa uu uga digay Golaha Fulinta in ay ku mashquulaan ama qabtaan shaqada Baarlamaanka, sida uu hadalka u dhigay. “Baarlamaanka oo kaliya ayaa leh” buu yiri Sanatarku “kor joogteynta xukuumadda”. Xeerkan ka hadlaya ciddda awoodda u leh in ay hishiis la gasho iyo sida loola galayaba hay’adaha iyo shirkadaha dalka iyo kuwa shisheeyaha ayuu ku baaqay in Baarlamaanka loo geeyo, marka uu furmo Kalfadhigiisa 5-aad.
Xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal ayaa isaguna dhankiisa qaba aragtida ah in Xukuumadda Soomaaliya ay ka faa’ideysaneyso Xirnaanta Barlamanka oo fasax ku maqan, waxa uuna ugu baaqay Guddiyada ku shaqada leh in ay kula xisaabtamaan Xukuumadda Soomaaliya qaladaadka ka dhacaya Xiliga Fasaxa Baarlamaanka. “Waxaan ugu baaqayaa xukuumadda in ay ilaaliso kala madax-banaanida Golayaasha Fulinta iyo Sharcidajinta” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Mursal”.
Hoos ka aqriso xeerk ay Xildhibaannadu diidan yihiin.
Deg Deg: Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka oo goordhaw lagu dilay Muqdisho
Xildhibaan Sardheeye oo wareejiyay xilkii gudoomiyaha daladda dhalinyarada Puntland